Knight Quest bụ ihe nkịtị dabere na chess nke ụlọ ọrụ Uruguayan | Androidsis
Ruo ọnwa ole na ole anyị gosipụtara egwuregwu dị iche iche dabere na ma ọ bụ dị ka isi iyi nke mkpali iwu nke chess. Kpọọ ọzọ: Knight Quest, nke a na-eme nke ọma nke mere na anyị ga-agakwuru onye na-agba ọsọ na-enweghị njedebe na mmegharị nke mpempe cheesi.
A na-edozi mmegharị ahụ na ndị nke gị maara mmegharị ahụ, ị ​​ga-ama nke ahụ bishọp na-agagharị dị ka diagonally, ụlọ elu vetikal na kwụ ọtọ ma si otú ahụ niile cheesi iberibe. Ọ bụ ihe ndabere maka oge anyị ga-eji kpori ndụ oge anyị na-eche dọkịta ma ọ bụ ụgbọ ala n'onwe ya.
1 Chess dị ka ndabere
2 Ngụkọta nke ọkwa 45 na Knight Quest
3 Ibido egwuregwu a
Chess dị ka ndabere
Anyị nwere ọtụtụ na-adịbeghị anya izu kedu ka Chessplode si, dị mgbagwoju anya ma na-atọ ụtọ, na ChessFinity, que nwere myirịta dị iche na nke anyị nwere taa site na tebụl: Knight Quest. Ha niile nwere otu ọnụ: ha na-eji ụfọdụ iwu cheesi iji mepụta ahụmịhe egwuregwu ọhụụ.
Knight ọchịchọ were nke ọ bụla n’ime cheesi ka anyị wee soro ha gaa site n'ogo nwere ngwụcha na nke anyị ga-eche ihu dị ka ọtụtụ taịl nile. Anyị ga na-agagharị mgbe niile na-ezere ịdaba na mmegharị nke ụfọdụ ibe anyị ga-abịakwute anyị.
Ọ bụ chee echiche nke ọma maka mmegharị a ga-emeEbe ọ bụ na ọ bụrụ na ị rute na square kpọmkwem ebe pawn nwere ike ịwakpo ya diagonal, egwuregwu ahụ ga-akwụsị ka ị nwee ike ịmalite ya. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe nnwere onwe imegharị ma laghachi azụ wee rite uru na mgbakwunye ndị ahụ ị ga - ahụ ma ọ bụ kpochapụ ụfọdụ ibe ga - enye gị ọkwa dị elu wee gaa ụlọ ahịa ịzụta ihe.
Ngụkọta nke ọkwa 45 na Knight Quest
N'adịghị ka Chessplode, ebe anyị na-egwu egwuregwu egwuregwu chess n'ezie, Knight Quest bụ nke nkịtị nke site n'ịlele mmegharị nke ndị rooks ma ọ bụ ndị eze nwanyị ahụ nke ọma, anyị nwere ike ịgafe na uche anyị. Ee n'ezie, na mbụ ọ nwere ike isi ike ma ọ bụrụ na ịchetaghị mmegharị ahụ nke taịl nile, ọ bụ ezie na ekele maka nkuzi, na mbido ọ bụla nke ọkwa ebe a na-emepụta taịl ọhụrụ, ị ga-enwe ike ịga nke ọma.
Enwere ngụkọta nke 45 etoju na egwuregwu nkịtị a dabere na chess na ọnọdụ na-enweghị ngwụcha ma ọ bụrụ na ọ tinyela anyị nke ukwuu nke na anyị chọrọ itinye onwe anyị n'ule ahụ. Na-egekwa ịnyịnya dị iche iche ntị na mmegharị ha, ebe ọ bụ na ụfọdụ na-achị achị na onye ọzọ agbajiri agbaji iji nwee ike ịdị iche na ahụmịhe wee si otú a na-egwu egwu ogologo oge.
Storelọ ahịa ahụ ga-enyere anyị aka hazie taabụ ma si otú a nye obere agba a egwuregwu nkịtị na Aims na-akụziri gị a obere ngagharị nke ọ bụla n'ime iberibe na mejupụtara cheesi.
Ibido egwuregwu a
Ọ bụ ihe ọchị na n’ime ọnwa ole na ole ọtụtụ egwuregwu apụtala dabere na cheesi. Amaghị m ihe ga - eme, mana ihe na - esote nwere ike bụrụ otu n’ime ndị na - achọpụta ya, yabụ anyị ga - ahụ ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ dabere na sistemụ egwuregwu ha.
Nyochawa ya Knight Quest bụ egwuregwu na-arụ ọrụ nke ọma na akụkụ a na-ahụ anya, ọ bụ ezie na enweghị ọtụtụ ambitions, na nke na usoro na-ewere ịhụ akụkụ nke ihe na-abịakwute anyị guzo ma si otú ahụ na-enye ihe na-akpali echiche na egwuregwu. A akpachara anya na aha ya egwuregwu iji gbalịa ijide onye ọkpụkpọ na-abịa ịnwale ya ma si otú a na-achụ nta na netwọk egwuregwu ha.
Knight Quest ị nwere ya n'efu, ọ bụ ezie na iji micropayment nke 3,19 euro iji kpochapụ mgbasa ozi niile ga-ebili ka anyị na-egwu egwu. A aha nke ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo vidiyo nke Uruguayan mepụtara yana nke anyị na-akwado site ebe a ka ị kpọsaa A na-achọ ịmata aha iji kpọọ ụfọdụ egwuregwu dị mma ma bụrụ ihe na-atọ ọchị. Ugbu a, anyị hapụrụ gị a usoro nke ezigbo cheesi egwuregwu ịkwaga n'ọkwa ọzọ wee bụrụ onye nkuzi.
Onye edemede: 74%
Onye edemede: 54%
Onye edemede: 72%
Mgbanwe mbụ chess
Nhazi nke ihuenyo gị
Ọ bụrụ na ọ ga-efu otu euro, ọ ga-ezu oke. Ọ bụ ihe nkịtị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Knight Quest bụ egwuregwu nkịtị nke ị ga-eji otu chess gafere
Nkọwa na vidiyo nke Njikọ nke Akụkọ Ifo ma ọ bụ LoL maka gam akporo pụta